Rising Voices: Tamberin’ny taona 2010 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2018 8:05 GMT
Taona feno hetsika ho an'ny Rising Voices sy ny fiarahamoniny ny taona 2010. Voasambotra i Théophile Kouamouo, iray amin'ireo bilaogera malaza ao Afrika Miteny Frantsay sy mpitarika ny tetikasa Abidjan Blog Camps, izay nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices noho izy namoaka tatitra an-gazety ary navotsotra rehefa avy nigadra tapa-bolana tany am-ponja. HiperBarrio avy any Kolombia kosa no nandresy tamin'ny Loka ho an'ny Asa Fanaovan-gazety Voalohan'ny Fiarahamonina natolotry ny Oniversite Antioquia tamin'ny sokajy sehatra Tranonkalam-piarahamonina tsara indrindra.
Nanao veloma ho an'ny Talen'ny Fanentanana, David Sasaki ny fiarahamonina ary niarahaba ny tale vaovao Eduardo Ávila.
Tamin'ity taona ity, nanome famatsiam-bola madinika hatramin'ny 2500 Euro ho an'ireo fikambanana telo tsy miankina amin'ny Fanjakana Ejypsiana ny Rising Voices, izay fiarahamiasa tamin'ny Heinrich Böll Foundation mba hampiofana momba ny median'olon-tsotra ho an'ireo vondrona zara raha fantatra ao Ejypta mba ahafahan'izy ireo maneho ny hevitr'izy ireo.
Shinetsetseg (Shinee) Sukhbaatar avy amin'ny Tetikasa Nomad Green tao Mongolia
Olzod Boum-Yalagch tao amin'ny Tetikasa Nomad Green tao Mongolia
Saki Golafale avy amin'ny tetikasa Ceasefire Liberia tao Liberia
Nat Nyuan-Bayjay avy amin'ny tetikasa Ceasefire Liberia tao Liberia
Nora Catalina Urquijo avy amin'ny tetikasa HiperBarrio tao Kolombia
Yesenia Corrales avy amin'ny tetikasa HiperBarrio tao Kolombia
Edgar Andres Yana Lisme avy amin'ny Voces Boliviana ao Bolivia
Getutza avy amin'ny tetikasa Blogging The Dreams ao Romania
Tahina Rakotomanarivo avy amin'ny FOKO ao Madagasikara
Ahmed Awadalla avy amin'ny tetikasa Exploring Taboos (Mnavatsava ny fady) ao Ejypta
Randa AbulDahab avy amin'ny tetikasa Women of Minya Day by Day [Vehivavin'i Minya] ao Ejypta
Sara Abd Al-Maktari avy amin'ny tetikasa Empowerment of Women Activists in Media Techniques (EWMAT) ao Yemen
Bilaogeran'ny nahazo ny lokan'ny laptops OLPC (XO) avy ao Orogoay – Fizarana 1, Fizarana 2
Natao tamin'ny volana Mey tao amin'ny Tranombokim-panjakana Santiago tao an-drenivohitr'i Shily ny Vovonan'ny Global Voices Citizen Media 2010. Tetikasa Rising Voices efatra no nampahafantarina nandritra ny roa andron'ny vovonana. Ity ny tatitra misy ny fizarana roa (Fizarana 1, Fizarana 2) manasongadina ny fampahafantarana sy ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpikambana nanatrika ny fihaonambe.
Nasaina handray fitenenana tao amin'ny BarCamp Santa Cruz, Bolivia tamin'ny volana Janoary i Catalina Restrepo ao amin'ny tetikasa HiperBarrio ao Medellín, Kolombia. Nanasongadina an'i Hugo Miranda ao amin'ny Voces Bolivianas avy ao Bolivia ihany koa ny hetsika.
Tamin'ity taona ity, nasaina tao amin'ny Campus Party tao Colombia ireo mpikambana ao amin'ny HiperBarrio ary nasaina nanao zavatra hafa, mampiasa kamerà mba handrakitra ny hetsika tamin'ny CampusBlog.
Tamin'ny Febroary, nambara ny Bilaogy Malagasy Tsara Indrindra taona 2009 (BOMBS). Nahazo ny loka ireo bilaogera maromaro avy amin'ny FOKO, nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices tao Madagasikara.
Ghaida'a Al Absi, mpitarika ny tetikasa nilaza hoe: “ny tetikasa EWAMT dia tahaka ny labozia miaraka amin'ny labozia hafa, izay manazava ny haizina ao Yemen”.
Bilaogera Ahmad Awadalla ao amin'ny tetikasa “Manavatsava ny Fady” kosa mitarika atrikasa fanabeazana momba ny firaisana ara-nofo ao Ejypta ary nanoratra momba ireo adihevitra mikasika ny lohahevitra (Famotsirana ny Vehivavy) tamin'ny mpianany.
Ruben Hilary ao amin'ny tetikasa Voces Bolivianas, miaraka amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo sasany ao El Alto, Bolivia, kosa nametraka vondrom-piarahamonina virtoaly Jaqi Aru. Ny tanjon'ny tranonkala Jaqi Aru dia manasongadina sy manaparitaka ny fiteny Aymara ao amin'ny aterineto amin'ny alalan'ny famoronana votoaty media nomerika, izay ahitana fandikan-teny, fampiasana media marolafy sy fitaovana media sosialy.
Nizara sary sy lahatsary sasany misy ny fetibe balaonina tao La Loma (Fetiben'ny globos de La Loma 2010) ireo olon-tsotra tia manao gazety avy amin'ny Hiperbarrio, nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices.
Olon-tsotra mpanao gazety sivy avy amin'ny Nomad Green ao Mongolia no nitsidika an'i Taiwan mba hahafantatra bebe kokoa momba ny olana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ary ny kolontsaina ao Taiwan ary nahazo fiofanana momba ny mediam-bahoaka.
Nahazo ny famantarana azy ara-dalàna ho toy ny fikambanana tsy mitady tombontsoa ihany ny Hiperbarrio avy ao Kolombia nony farany. Ahafahan'ny fikambanana mivoatra hatrany izany satria mety ho karamain'ny ivon-toeram-panjakana na tsy miankina izy ireo amin'ny hetsika fanentanana. Araka ny fifanarahana teo amin'ny EPM Foundation Network sy ny HiperBarrio avy ao Kolombia, natomboka tamin'ny taona 2010 ny hetsika fanentanana momba ny mediam-bahoaka tao amin'ny vondrom-piarahamonina 3 vaovao tao amin'ny tranom-boky 3 tao Medellín (Villatina, La Esperanza ary EPM).
Nomen'ny W.K. Kellogg Foundation vatsy 10.000 dolara mba hanomboka fitaovam-piadiana (sampana) vaovao antsoina hoe Ceasefire (Fampitsaharana Ady) ny tetikasa Ceasefire Liberia. Izany tetikasa izany dia hifantoka amin'ny famoronana tetikasa median'olon-tsotra ho an'ny Afrikana mpifindra monina sy ny tanora Afrikana-Amerikana ao amin'ny nosy Staten mifototra amin'ny maodely Ceasefire Liberia.
Noho ireo bilaogera avy amin'ny tetikasa samihafa amin'ny Rising Voices, afaka mamaky tantara marobe avy ao Liberia, Madagasikara, Cote d'Ivoire, Mongolia, Romania, Kolombia, Yemen, Repoblikan'i Kongo, Ejypta, Kenya, Bolivia, Okraina, Orogoay, sns isika. Nisy koa ireo bilaogeran'ny Rising Voices sasany nandray anjara sy nanampy tamin'ny hetsika Blog Action Day 2010 sy ny One Day On Earth. Manantena handre feo amin'izy ireo hatrany izahay. Ny ‘Fampahafantarana ny Toro-lalana Global Citizen Media’ kosa dia efa nadika tamin'ny teny Makedoniana sy Albaney.